Inona ny rindrambaiko tsara indrindra amin'ny aterineto amin'ny orinasanao Amazon?
Tian'ny rehetra ny manao vola, ary i Amazon dia manome ny fahafahana rehetra hanao izany. Izany no mahatonga ny raharaham-barotra lehibe indrindra amin'ny Amazôna ho fatratra amin'izao androntsika izao. Ny ankamaroan'ny orinasa ecommerce dia manokatra ny vokatra amin'ny Amazon izay mahatonga ity sehatra ity ho tena mifaninana - aeolus tyres reviews. Ankoatra izany, i Amazon dia mitaky ny toro-làlana fototra hanatsarana ny vokatra hita eo amin'ny fikarohana.
Raha vao vaovao amin'ny Amazon ianao, dia mety ho sarotra aminao ny hahatongavana amin'ny TOP Amazon amin'ny fikarohana raha tsy manatanteraka rindrambaiko malaza Amazon. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny rindrambaiko mivarotra an-tserasera amin'ny aterineto ho an'ireo izay te-hivarotra Amazon raha oharina amin'ny pro.
Ny antony voalohany tokony hampiasanao mampiasa rindrambaiko Amazon
Mba hahazoana tombony manan-danja, mila mampiasa vola ao aminao ianao. Ny Amazona dia mikasika ny fampiasam-bola ambony, fotoana sy vola. Raha toa ka apetrakao ao anatin'io asa io ireo singa ireo, dia hitondra tombony ho anao manokana ianao isaky ny volana. Na izany aza dia mila zavatra bebe kokoa hatrany isika; Izany no fomba fiasan'izao tontolo izao.
Tsy misy afa-tsy 24 ora isan'andro, ary na dia ny mpivarotra Amazon aza dia mila matory. Noho izany, raha mitantana ny zava-drehetra amin'ny tenanao ianao, dia mety ho very ao amin'ny asanao. Alao sary an-tsaina hoe mila manao fikarohana ianao, manalefaka, manara-maso ary manadihady amin'ny anao manokana, mampitaha ny angon-drakitra maro. Ary ahoana ny amin'ny famenoana sy fandefasana an-jatony an-jatony isan'andro? Tsia, tena tsy vita izany. Amazon dia afaka manatsotra ny fiainanao amin'ny fanatanterahana ny fahombiazanao. Midika izany fa ny sambo rehetra entina entinao, entana sy fanohanana dia haparitaka amin'ny Amazon. Afaka mandefa vokatra any amin'ny trano fialofana ianao ary mifantoka fotsiny amin'ny raharaham-barotra Amazona anao. Na izany aza, dia ny antsasaky ny ady ihany. Ny orinasa tsirairay dia mila mitombo, ka mila ampiana ampahany lehibe amin'ny andro fiasanao amin'ny orinasa fivoaranao. Mila miasa eo amin'ny lisitra ianao, mikaroha ny teny fanalahidy vaovao, manara-maso ny lahatsoratry ny vokatra ao amin'ny Amazon SERP, manangana zavatra bebe kokoa ary manatsara ny serivisy mpanjifa mba hampitomboana ny fahatsiarovanao ny raharaham-barotra ary hampitombo ny fidiram-bola. Ary mitaky fotoana sy ezaka maro izany rehetra izany. Noho izany dia mila tolotra fanampiny fanampiny ianao izay hanampy anao hitantana ireo zavatra rehetra ireo. Tadidio fa mila miasa amin'ny orinasa ianao fa tsy ao anatin'izany. Amin'ny ankapobeny, mpivarotra izay manankarena harena, tsy manelingelina ny vokatra na fampitandremana momba ireo antsipiriany kely.
Noho izany, mila manana fari-pahaizana momba ny fahasalamana ara-pahasalamana Amazon ianao. Azonao atao ny mametraka manam-pahaizana momba ny aterineto sy SEO manokana na miankina amin'ny automation sy ny rindrambaiko Amazon. Raha ny amiko, dia mazava ny safidy. Amin'ny fampiasana fitaovana an-tserasera, dia ho afaka ny hanao ny marina rehetra ianao raha tsy misy ado. Izany no fanalahidin'ny fahombiazan'ny Amazon. Noho izany, andeha isika hifanakalo hevitra momba ny fanavaozana Amazon sy ny rindrambaiko fikarohana izay ho tonga soa ho anao sy ny fivoaran'ny raharaham-barotra Amazon.
Ny tsara indrindra Amazon Software ho an'ny fanatsarana ny lalao
Mila manomboka ny ecommerce toy toy ny mpandresy. Noho izany dia zava-dehibe ny fisafidianana ny tsena mahasoa indrindra sy ny vokatra izay hividiananao varotra. Mba hanatsorana io asa io dia azonao ampiasaina ny Tool Jungle Scout. Ity fitaovana ity dia hanampy anao hahita Amazon products izay azonao ampiasaina, haingana ary tsy misy fiheverana. Amin'ny fampiasana fitaovan'ny Jungle Scout dia hampihena ny taham-pahafaham-bola ianao ary hampivoatra ny tombony satria manampy amin'ny fitadiavana ny fahafaha-manaon'ireo am-pahamendrehana amidy Amazon amin'ny sehatra sy ny fisorohana ny lafo. Ity rindrambaiko web ity dia manome rafitra fandraketana an-tsarimihetsika amin'ny fikarakarana ny vokatra Amazon sy ny angona tahiry momba ny vaovao. Eto ianao dia afaka misafidy sokajy, mifantoka amin'ny Best Seller Rankings, fivarotana, hevitra, sy ny sisa.
Misy fomba roa ahafahanao mampiasa rindrambaiko Jungle Scout - toy ny rindrambaiko web, na koa hoe ny extension Chrome.
Ampiasaina ho toy ny rindrambaiko web izany, dia mahazo fahafahana hahita zava-tsarobidy tsy misy vidiny sy vokatra manerana ny kaody Amazon. Ity famelabelarana ity dia manome fahafahana anao hanivana ny tahiry Amazon, amin'ny sokajy, ny vidiny, ny varotra ary ny metry hafa mba hanampy anao hahita ny zavatra tsy azonao ampiasaina.
Raha mampiasa ny fitaovana Jungle Scout ianao tahaka ny fanitarana Chrome, dia ho afaka hijery sy hanamarina ny tsipika momba ny vokatra ianao rehefa mijery. Azonao atao ny manamarina ny vidin'ny vokatra tsirairay, ny vidin'ny vidiny, ny isa miverimberina ary ny tahirin-kevitra bebe kokoa ho an'ny fampitahana amin'ny vokatra mazava.
Anisan'ireo tsy fahombiazan'ity fitaovana ity, azoko atao ny mamerina ireto faktiora manaraka ireto: faktiora fito andro monja fa tsy fandaharanasa feno.
Raha vantany vao fantatrao izay vokatra tianao hovidina, dia mila mahazo vatana. Ny fitadiavana vokatra sy famandrihana dia singa iray tsy azo ihodivirana izay tsy azo tsinontsinoavina amin'ny dingana voalohany amin'ny fanentanana ara-marketing Amazon. Matetika no mampatahotra ity asa ity, indrindra fa ny ankamaroan'ny mpamatsy dia any ampitan-dranomasina. Na izany aza, mba ho mora kokoa ny mitady mpamatsy iray araka ny eritreritrao. Andeha isika handinika soso-kevitra sasany izay afaka manampy anao amin'ity asa ity.
Alibaba dia sehatra fanta-daza Shinoa ahafahanao mividy betsaka. Ny ankabeazan'ireo zavatra mifototra eto dia natao any Azia. Izany no mahatonga ny vidiny ho tsy ambony raha ampitahaina amin'ny vokatra vita any Etazonia sy Eoropa. Ka, Alibaba no tsara indrindra aminao. Raha vao jerena dia toa manahirana loatra, saingy mila manomboka fotsiny ianao. Voalohany, mila mandefa fividianana fividianana ianao, avy eo mitady fikarakarana vokatra ary mifandray amin'ny mpamatsy amin'ny mailaka na Skype. Voalohany, mila mangataka famokarana vokatra avy amin'ny mpamatsy isan-karazany ianao mba hahafahana mampitaha ny kalitao. Tokony hahafantatra ianao fa mpamatsy maro no hividy orinasa izay afaka manatsotra ny zava-drehetra, nefa lafo kokoa. Ankoatra izany, ilaina ny manamarika fa Alibaba dia tena Aliexpress ho an'ny samples izay tsy misy afa-tsy ny fahasamihafana amin'ny prix. Na izany aza, ity tranonkala ity dia ara-dalàna kokoa noho ireo sehatra varotra varotra Shinoa.
Anisan'izany ny fiaraha-miasa amin'ny Alibaba, azoko amboarina ireto manaraka ireto:
mampatahotra ny manomboka;
dia maro ireo mpaneso.
Ireo zavatra ilaina ireo dia hanampy anao hanomboka tsara. Na izany aza, dia mila fotoana ny famokarana. Noho izany, afaka mandany amim-pahombiazana ianao amin'ny alàlan'ny fanokafana azy amin'ny lisitra famoronana sy fanatsarana.